Mareykanka oo musuq-maasuq dartiis cunaqabateyn u saaray saddex Paraguayan ah
Maamulka Madaxweyne Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa waxay rumeysan yihiin in ka hor-tagga masuqmaasuqa uu lafdhabar u yahay danaha ammaanka ee qaranka Mareykanka, sidoo kale wuxuu Mareykanka qaadayaa tallaabooyin ka dhan ah kuwa gala dambiyada masuqmaasuqa ee dunida oo dhan.
Si ciqaab loogu soo rogo jilayaasha masuqmaasuqa islamarkaana loo ilaaliyo in lagu xadgudbo hannaanka maaliyadeed ee Mareykanka, ayaa xafiiska OFAC ee waaxda maaliyadda ee Mareykanka u qaabilsan la socodka hantida dadka shisheeyaha waxuu cunaqabateyn saaray saddaxda muwaadin oo u dhashay Paraguay, kuwaas oo kala ah Kassem Mohamed Hijazi, Khalil Ahmed Hijazi iyo Liza Paola Doldan Gonzales, taas oo ay ku muteysteen doorkooda masuqmaasuq ee dalka Paraguay. OFAC waxay sidoo kale tilmaantay shan hay’adooda oo xiriir la leh shaqsiyaadka la cayimay.
“Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an teegeeridda dadaallada Paraugay ee ka dhanka ah masuqmaasuqa iyo horumarinta la xisaabtanka kuwa curyaaminaya hay’adaha dowlaiga,” ayuu yiri xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken.
Kassem Mohamed Hijazi ayaa wuxuu gacanta ku hayaa shirkad lacagaha kala xawisha oo calami ah taas oo fadhigeedu uu yahay magaalada Ciudad Del Este ee Paraguay.
Shabakadda Kassem, oo laaluush siisa mas’uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa la shaqeysa shirkado waxayna xiriirro ganacsi la leedahay caalamka oo dhan oo uu kujiro Mareykanka.
Saaxiibkiisa Khalil Ahmad Hijazi ayaa lagu tilmaamay inuu kaalmo maaddi ah siiyo Kassem taas oo la xiriirta falalka Masuqmaasuq ee Kassem.
Xafiiska OFAC ayaa tilmaamay in shirkadaha ka diiwaan Paraguay ee Espana Informatica, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informatica S.A., and Mundo Informatico yihiin kuwo uu leeyahay ama uu gacanta ku hayo Khalil.
Liz Paula Doldan Gonzalez waa mid kamid ah saaxiibada Kassem.
Doorkeeda waa dhexdhexaadiye bixiya laaluushka iyo isku xiraya shirkadda iyo cidda qaadanaysa, waxay laaluushka siisaa shaqaalaha dekadda iyo saraakiisha kastamka cashuuraha si ay u socodiiyaan badeecadaha galaya iyo kuwa ka baxaya Paraguay.
Shirkaddeeda uu saldhiggeedu yahay Paraguay ee Mobile Zone International Import-Export, ayaa xafiiska OFAC uu tilmaamay mid ay leedahay ama ay maamusho Doldan.
Kassem, Khalil iyo Doldan ayaa la cunaqabateeyay iyadoo loo cuskaday sharciga la xisaabtanka xuquuqda aadanaha ee Global Magnitsky, kaas oo lagu bartimaadeedsado kuwa xudgudubka daran ee ka dhan ka binu’aadanimada iyo mususqmasuqa ka geysta caalamka oo dhan.
Cunaqabateyntaasi darteed, dhamaan hantida shaqsiyasaadka ama hay’adaha la carrabaabay ee gudaha gudaha Mareykanka ama meelaha uu maamulo ayaa la xannibay, dadka Mareykanka ayaa waxaa laha manuucay inay la macaamil ganacsi la yeeshaan dadka la cayimay.
“Tilmaamahani ku qeexan xeerka cunaqabateynta Global Magnitsky waxay muujinayaan sida ay nooga go’antahay inaan la hortagno masuqmaasuqa islamarkaana aan kor u qaadno la xisaabtanka saraakiisha curyaaminaya hay’adaha dowladda,” ayuu yri Andrea M. Gacki oo ah agaasimaha xafiiska OFAC,
Wuxuu intaasi ku daray, “waaxada maaliyadda waxay sii wadi doontaa iyadoo adeegsanaysa mas’uuliyiinteena inay ka hortagto shaqsiyaadka sharci darrada ah iyo shirkadahooda safka hore inay ku axdgudbaan hannaanka maalaiyadeed caalamiga ah si u waxyeelleeyaan dadka ku nool caalamka oo dhan eek u dhaqam xeerarka.”